Bacrimin Jannooyin geedo yaryar - Shiinaha Qingdao King Good Qalabka New
Bacrimin Jannooyin geedo yaryar
Marka ay timaado in kordhaya cunto caafimaad leh adiga kuu gaar ah, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo dabiiciga ah, Bacriminta organic. Waan ogahay beer organic dhawaajin karaa cabsi, iyo dadka u muuqdaan in ay gaaraan si ay u walax kiimiko ah, maxaa yeelay waxa ay u muuqataa fudud. Laakiin nooca shaqada, iyo isticmaalka Bacriminta organic beerta ma aha caafimaad keliya noo, waxaa dhab u shaqeeyo si fiican.
Waxa aan u adag tahay in la dhiso ilaa hodan, ciidda organic beero aad. Mid ka mid ah hab fudud loo sameeyo waa in wax laga beddelo aad ciidda la compost iyo qalabka kale ee dabiiciga ah si joogto ah. Ha welwelin, beddelidda ciidda ma laha in ay adag tahay. In wax laga beddelo aad ciidda waxaad isticmaali kartaa dabiiciga ah, bacriminta organic Jannooyin geedo yaryar - sida compost aad naftaada ama iibsan dukaanka, ama aad ka iibsan kari lahaa waxyaabaha sida castings dixiri, digada dhalan rogo, ama ganacsi Bacriminta beerta organic. xitaa waxaad ka iibsan kartaa bacriminta beerta geedo yaryar organic sida Healthy Grow bacrimin geedo yaryar organic ama Sustane oo dhan cunto dhirta dabiiciga ah, la hadal oo ku saabsan fududahay!
Related Post: 6 wax beerta kasta oo cuntada cusub baahan yahay inuu ogaado
Waxaa jira tan oo fursado cajiib leh Bacriminta organic beerta on suuqa maalmahan, oo waxay super waa fududahay in la isticmaalo. Waxaad ku dari laga yaabaa bacrimin sii daayo gaabis ah organic beertii ka hor la beero, ama waxa rusheeyaan hareeraha saldhigga dhigtee iyo waxa xoqin ciidda. Si kastaba ha ahaatee, iyo geedo yaryar oo aad ka nafaqada ku daray ay ka faa'iideysan doonaan.
waqti Post: Mar-05-2018